Maninona ny alika saka no manana fandokoana sakafo | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 28, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Manoratra i Seth Godin manipulator ary ilay mpamorona an'i Dilbert Scott Adams dia manoratra momba ny fanodinkodinana.
Hoy i Seth:
Isan'andro dia misy masoivoho an-jatony ara-bakiteny miasa mafy, manandrana mamantatra ny fomba hampidirana ireo hevitra momba ny orinasa ao anaty rafitra izay miendrika an-trano sy tena izy.
Manontany tena i Seth rehefa hanomboka hanodinkodina ny media sosialy ireo mpanao politika… Heveriko fa tsy naheno izy fa efa nanandrana izany tamin'ny bilaoginy i Katherine Harris raha nisy mpiasa iray nanao ny hevitra vitsivitsy voalohany (ny adiresy IP dia naroson'izy ireo tamim-pahamalinana tamin'izy ireo) .
Raha misy ny safidy malalaka, maninona ny mpilatsaka hofidina avo indrindra manana volo tsara indrindra mazàna no mandresy amin'ny fifidianana?
Tsy azoko antoka raha efa naheno ianao momba ny «satroka mainty» mifanohitra amin'ny fanatsarana ny motera fotsy "satroka fotsy, fa io kosa dia dichotomy tonga lafatra amin'ity lohahevitra ity. Black Hat SEO dia fanodikodinana ny motera fikarohana hahazoana fametrahana amin'ny alàlan'ny fomba tsy tena izy. White Hat SEO dia injenieran'ny atiny hanatsarana ny fametrahana ao amin'ny Search Engine mba hanatsarana ny valin'ny orinasa. Ny tanjon'izy roa dia ny manatsara ny fametrahana fikarohana… fa ny satroka fotsy no manao azy satria mihevitra izy ireo fa tokony hanana fametrahana tsara kokoa.
Ny valinteniko amin'ny fandinihana an'i Seth sy ny hevitr'i Scott dia ny olona, ​​amin'ny ankamaroany, tsy mahalala. Mahatoky ny tarehy, fofona, marika, fifanomezan-tanana… loko iray izahay. Ireo fitaomana ivelany rehetra ireo dia miteraka fihetsem-po ao amintsika. Manantena ny mpivarotra fa ny fitambaran'ny fihetsem-po dia hitarika antsika hividy. Mahalana isika no manandrana manao ny asa mafy mba hahatakarana zavatra. Raha tena te hivarotra zavatra mampalahelo amin'ny olona iray ianao dia lazao azy ireo hoe ahoana izany mahatsapa, tsy dia miasa tsara.
Ohatra vitsivitsy hafa:
Paris Hilton mivarotra hamburger.
Verizon mivarotra ny 'tambajotran'arivony' ao aorianao (manantena aho fa izy ireo no ao ambadiky ny kaontera)
Nascar mivarotra fandefasana UPS
Heck, azonao atao aza ny misintona ny hira tianao amin'ny dokambarotra Tide ao amin'ny Site tide! Aza mino ahy? Ity misy iray:
[Feo: https: //martech.zone/audio/tidesong.mp3]
Io antony io ihany no mahatonga ny sakafo alika hanana fandokoana sakafo. alika jamba loko tsy mahita loko toa ny olombelona. Ny loko dia tsy manampy tsiro na sakafo mahavelona. Moa ve tsy fanodikodinam-bola ho an'ny orinasan-tsakafo alika ny manampy fandokoana sakafo amin'ny sakafon'ny alika toy ny tokony hametrahan'ny orinasa fanoloran-tena amin'ny Digg? Marina izany… fa ny tena izy dia mividy azy ny olona satria 'tsara tarehy'. Iza no te hanokana fotoana hijerena ny ao ambadiky ny fonosana momba ny atiny matavy, ny akora namboarina, ny akora natoraly… ny ankamaroantsika tsy.
Raha mbola misy tombony azo amin'ny fanodikodinana olona na teknolojia dia ho eo foana ny satroka mainty hahazoana tombony amin'izany.
30 Okt 2006 amin'ny 8:36 PM
Nividy hamburger avy any Paris aho ary izany no tanjon'ny fanampiana, infro mahafinaritra
Febroary 13, 2008 amin'ny 9:16 PM
TSY jamba loko ny alika.
Azonao atao ny milaza ny hevitrao nefa tsy mampiseho ny hadalanao amin'ny filazana fa ny alika dia miantehitra amin'ny fofona, mihoatra noho ny fahitana, ary noho izany ny fandokoana sakafo dia natao mba hahatonga ny sakafo ho tsara tarehy kokoa amin'ny mpividy. Miezaka manao fikarohana eto aho, fa ny Internet dia tsy toerana tsara ho an'izany satria ny adala adala rehetra dia afaka manoratra lahatsoratra amin'ny Internet.
Febroary 13, 2008 amin'ny 11:27 PM
Diso hevitra ny lahatsoratra – tsy miloko ho an'ny alika ny sakafon'alika fa miloko ho an'ny olona mividy azy. Eny, afaka mahita ny alika sasany loko.
Manantena aho fa indray andro any dia haharaka ny fahaizanao manome fanehoan-kevitra mahasoa ny fomba amam-panao.